पोर्न फिल्मबाट मिया खलिफाले कति कमाइन ?
एजेन्सी, पोर्न उद्योगकी मिया खलिफाले अहिलेसम्म साढे ८ लाख कमाएको बताउँछिन् । यो कुरालाई फ्यानले भने पत्याएका छैनन् । जबकि, एक जमानामा सबैभन्दा चर्चामा आउने एडल्ट स्टारका रुपमा मिया नै थिइन् । उनलाई एडल्ट फिल्म खेलेका कारण ज्यान मार्ने धम्की पनि दिइएको थियो । एक अन्तर्वार्तामा मियाले भनेकी छिन्, यो उद्योगमा लागेर मैले करोडौँ कमाएँ […]
एजेन्सी, लामा खुट्टाकी रसियन मोडेल इकाटेरिना लिसिनाले विश्वकै लामो खुट्टा भएकी महिलाको रुपमा गिनिज बुकमा नाम लेखाएकी छिन् । ६ फिट ९ इन्च अग्ली मोडेल लिसिनाको नाउँमा विश्वकै अग्ली मोडेलको किर्तिमान यसअघि नै कायम भैसकेको छ । २९ वर्षकी लिसिनाको बायाँ खुट्टाको लम्बाई १३२.८ सेन्टिमिटर छ भने दायाँ खुट्टाकेा लम्बाई १३२.२ सेन्टिमिटर रहेको छ । […]
ऋषि कपुरले नितूलाई डेट मात्र गर्छु, कहिल्यै विवाह गर्नेछैन भने पनि कसरि भयो विवाह?
एजेन्सी, ऋषि कपुर र नितू सिंहको लभ–स्टोरी निकै रोचक छ । फिल्ममा काम गर्दागर्दै नजिकिए पछि विवाह बन्धनमा बाँधिए थिए । नितूसँगको प्रेम सम्बन्धका बेला उनले भनेका थिए, ‘म तिमीलाई डेट मात्र गर्नेछु, कहिले विवाह गर्नेछैन ।’ ऋषिसँग नितूको इन्गेजमेन्ट पनि निकै रोचक तरिकाले भएको थियो ।
प्रियंका चोपडाले किन श्रीमान् निकको गलत उमेर लेखिन्
एजेन्सी, प्रियंका चोपडाले इन्स्टाग्राममा श्रीमान् निक जोनस निकसँगको एउटा फोटो सेयर गर्दै उनलाई टकिला ब्रान्ड भिल्ला भ्यानको लञ्चमा बधाई दिदै उनले लेखेकी छिन्, ‘तपाईमाथि गर्व छ । २७ वर्षको उमेरमा तपाई आफ्नै टिकलाको मालिक हुनुहुन्छ ।’ मानिसहरुले गरे यस्तो कमेन्ट एक प्रयोगकर्ताले लेखे, ‘उनी अहिले २६ वर्षमा छन्, २७ होइनन् ।’ एक अन्य प्रयोगकर्ताले लेखे, […]
सलमान खानले आफैंले आफैंलाई कोर्रा हान्न थाले (भिडियोसहित)
एजेन्सी, सलमान खान यतिबेला आफ्नो नयाँ फिल्म ‘दबंग थ्री’ को सुटिङमा व्यस्त छन् र यसैबीच उनले एउटा रोचक भिडियो सोसल मिडियामा सेयर गरेका छन् । यो भिडियोमा सलमानले आफूले आफैंलाई कोर्रा हानिरहेका छन् । सलमानको यो भिडियोः
रानू मण्डललाई ५५ लाखको फ्ल्याट दिएको कुरा झुटो
एजेन्सी, रानू मण्डल आज सोसल मिडियाको सेन्सेशन बनिसकेकी छिन् । रानूको आवाजको जादु यतिमा मात्रै सिमित भएन उनलाई बलिउडका संगीत निर्देशक हिमेश रेशमियाले बिलउडमा डेब्यूको मौका पनि दिए । रानूले हिमेशको फिल्मको एउटा मात्रै नभई दुई दुईवटा गीत गाइसकेकी छिन् । केही मिडिया रिपोर्टले सलमानले रानू मण्डललाई ५५ लाखको फ्ल्याट उपहारस्वरुप दिएको दाबी गरिरहेका छन् […]
गजल – यता कलियुगमा आफ्नै श्रीमतीलाई रेटिन्छ
गजल-जीबन मगर यता कलियुगमा आफ्नै श्रीमतीलाई रेटिन्छ । पत्नीलाई अरुसंगै ओछ्यानमा भेटिन्छ ।। अरे यार म कसको विश्वास गरुम । देश बेच्ने दलाल सिंहदरबारमा देखिन्छ ।। बोलो भने पोलीहाल्छ यता मेरो देशमा । मै हु भन्छ सरकार अनि दुईतिहाइमा जोखिन्छ ।। रेमिटेन्सले टाउकेहरुको भत्ता पचाउनालाई । बारम्बार युवा कतार खेदिन्छ ।। -जीबन मगर -हाल काठमाडौं
५२ वर्षको उमेरमा पिता बने शाहिद कपुरका सौतेनी बुवा राजेश खट्टर
एजेन्सी, बलिउड नायक ईशान खट्टरका पिता राजेश खट्टरको छोराको हालै जन्म भएको छ । राजेश खट्टरले ११ वर्षअघि वन्दना सजनानीसँग विवाह गरेका थिए । उनीहरुले आफ्नो छोराको नाम वनराज कृष्ण राखेका छन् । उनका छोराको जन्म तीन महिना अघि भएको थियो तर उनीहरुले यो खबर सार्वजनिक गरेनन् किनभने उनीहरुका छोरा लामो समयसम्म अस्पतालमा थिए । […]
नायिका पर्ल पंजाबीले किन छतबाट हाम फालेर गरिन् आत्महत्या ?
एजेन्सी, पर्ल पंजाबी नामकी यी नायिकाले २९ अगस्टको राती आफू बस्ने अपार्टमेन्टको छतबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेकी छिन् । पर्ल पंजाबी मुम्बईको ओशिवारा इलाकामा बस्थिन् । यी नायिकाले कुनै दिन बलिउडकी चर्चित नायिका बन्ने सपना बोकेकी थिइन् । ठूलो सपनासहित यी नायिकाले मनोरञ्जनको क्षेत्रमा कदम त राखिन् तर सायद उनी यो रेसमा टिक्नका लागि आइपर्ने […]
अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठीले हस्तमैथुन गरेपछि चर्चामा
एजेन्सी, अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठीले अभिनय गरेको मिर्जापुरमा हस्तमैथुनको सिन दिएका चर्चामा आएकी छन् । लाइब्रेरीको कुनामा बसेर एउटा कामुक किताब पढ्दापढ्दै उत्तेजित भएर हस्तमैथुन गर्न थालेको सिन फिल्ममा राखिएको छ । उक्त सिनको तीव्र विवाद भएको छ । तर यो सिन दिँदा आफूलाई कुनै ग्लानी वा पछुतो नभएको प्रतिक्रिया उनले दिएकी छन् । ‘मलाई यो […]
अभिनेत्री तमन्ना भाटियाको घरको मूल्य सुन्दा चकित पर्नुहुनेछ
एजेन्सी, साउथ फिल्मकी चर्चित अभिनेत्री तमन्ना भाटिया बिभिन्न कारणले चर्चामा आइरहने गर्छिन् । तमन्नाले अहिले सम्म धेरै फिल्ममा काम गरिसकेकी छिन् । पछिल्लो समय तमन्ना उनको सानदार घरका कारण चर्चामा आएकी छिन् । भारतिय मिडियाका अनुसार उनले मुम्बईको बर्सोवामा दुई गुणा बढी मूल्य तिरेर ‘सी भ्यु अपार्टमेन्ट’ खरिद गरेकी छिन् । अहिले उनी हाल बस्दै […]
रानु मण्डललाई सलमान खानले दिए ५५ लाखको घर
एजेन्सी, सलमान खानले ‘एक प्यारका नगमा है’ गीत गाएर एका एक चर्चामा आएकी रानु मण्डललाई मुम्बईमा ५५ लाखको घर गिफ्ट गरेको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । ‘एक प्यारका नगमा है’ गीतको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङमा आएपछी उनलाई गायक तथा संगीतकार हिमेशले गीत गाउने मौका दिए । हिमेशले पनि रानूको गायनबाट प्रभावित भएर एउटा गीत गाएका […]
डिभोर्सपछि जनावर सँग गायिका माइली साइरस
एजेन्सी, गायिका माइली साइरस आफ्ना पति लियाम हेम्सवर्थलाई डिभोर्स दिएपछि आजभोलि घरपालुवा जनावरसँग नजिकिएको केहि बिदेशी मीडियाले बताएका छन् । मिरर डट को डट युकेका अनुसार ‘पार्टी इन द युएस’ की गायिकाले पछिल्लो वर्ष क्यालिफोर्नियाको जंगलमा आगो लाग्दा घरमा पालेका १६ जनावरलाई मेम्सवर्थले बचाएपछि उनको तारिफ गरेकी थिइन् । हेम्सवर्थ र साइसरका घरमा ७ वटा […]
बलिउडकी नायिका आलिया भट्टमाथि चोरीको आरोप
एजेन्सी, बलिउडकी चर्चित नायिका आलिया भट्टलाई चोरीको आरोप लागेको छ । पाकिस्तानकी एक नायिकाले आलियालाई गीत चोरीको आरोप लगाएकी हुन् । आलियाले म्युजिक भिडिओमा डेब्यु गरेको ‘प्राडा’ बोलको गीत केहि समय अघि सार्बजनिक भएको थियो । उक्त गीतलाई पाकिस्तानी नायिका मेहविश हयातले चोरीको आरोप लगाएकी हुन् । ‘वाइटल साइन’ एल्बम्को ‘गोरे रंगका जमाना’ बोलको पाकिस्तानी […]
यी देशमा जहाँ बिबाह अघि सिलाईन्छ युवतीको योनी !
पूर्वी अफ्रिकामा यस्तो जाति छ, जसले छोरी मान्छेको योनी सिलाइ दिन्छन् । छोरी मान्छेले विवाह अगाडि यौन सम्पर्क नगरुन भनेर उनीहरुको योनी सिलाइन्छ । विवाह गरेपछि सिलाइएको योनी खोलिदिने चलन छ । यसरी योनी सिलाउँदा युवती विभिन्न रोगको सिकार हुने गरेका छन् । त्यस्तै अफ्रिकाकै घानामा एक परम्पराका अनुसार विधवा महिलाको आत्मा शुद्धीका लागि भन्दै […]
यी हुन् यस वर्षको विश्वकै सर्वाधिक आम्दानी गर्ने अभिनेत्री
एजेन्सी, अमेरिकी अभिनेत्री स्कार्लेट जोहान्सन यस वर्ष सर्वाधिक कमाउने अभिनेत्री बनेकी छन् । अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्सले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको सर्वाधिक कमाउने अभिनेत्रीहरूको सूचीले यस्तो देखाएको हो । पत्रिकाका अनुसार ३४ वर्षीया अभिनेत्रीले विगत १२ महीनामा ५ करोड ६० लाख डलर कमाएकी छन् । यससँगै जोहान्सन लगातार दोस्रो वर्ष सर्वाधिक कमाउने अभिनेत्री बनेकी हुन् । […]
प्रधानमन्त्रीलाई पत्र – देशमा जनताको हाँसो गुन्जियोस्
हामीलाई हाम्रो देश प्रिय अनुभूत भई नै रहोस ! कानुन बिनाको देश भन्ने पटक्कै अनुभूत नहोस् !! सत्तासिनहरुको मात्र नबनोस होला यो जन्मिएको देश ! जनताको यस्तो असल चाहना साँच्चै अव त पुरा बनोस् !! ज्योति बनेर बाँचौ हामी न्याय होस निस्पक्ष निस्वार्थ त्यो घामको जस्तै ! कर्म हाम्रा यति असल हुन अनि शीतल मायाँ […]
एजेन्सी, आइटम डान्स बिना बलिउड अपुरो हुन्छ । बलिउडका अधिकांश फिल्ममा ‘आइटम डान्स’ अनिवार्य जस्तै मानिन्छ । पछिल्लो समय प्रदर्शन भैरहेका प्रायः सबै फिल्महरुमा एक-एक वटा आइटम डान्स समावेश गरिएका हुन्छन् । अझ पुराना हिट गीतलाई रिमिक्स गरेर त्यसलाई आइटम डान्सको स्वरुप प्रदान गर्नु अहिले फेसन जस्तै बनेको छ । त्यसरी डान्स गरेर पारिश्रमिकको रुपमा […]
एजेन्सी । भारतकी चर्चित गायिका नेहा कक्करको हिमांश कोहलीसँग ब्रेकअपपछि ‘इन्डियन आइडल–१०’का प्रतियोगी विभोर पराशरसँग अफयेर रहेको खबरले यति बेला भारतिय मिडिया गर्माएको छ । विभोर पराशरसँग अफयेर चलेपछी अहिले नेहा डेटिङमा जान थालेको बताइएको छ । नेहासँगको अफेयर बारे चलेको हल्लामा विभोरले अस्वीकार गरेका छन् । विभोर पराशरसँगको अफयेरको हल्ला चलेपछी नेहाले भनिन् कि कसैलाई […]
बलिउड अभिनेत्री सिल्पाको पाइन्ट फुस्केपछि यसरी ट्रोलको सिकार भइन
एजेन्सी, बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीको एक तस्विरले सामाजिक संजाल तातेको छ । उनि सोहि तस्विरका कारण यतिबेला ट्रोलको सिकार भएकी छिन् । उक्त तस्विरमा उनि एक हातमा छाता र अर्को हातले आफ्नो जिन्स पाइन्ट समाउँदै गदै अबस्थामा देखा परेकी छिन् । बेला बेलामा चर्चामा आउने उनि अहिले पनि कम्मर भन्दा ठूलो जिन्स लगाउका कारण चर्चा […]